Maalinta: Oktoobar 23, 2018
Trabzon-Erzincan tareenka waa mid ka mid ah Mashaariicda Istiraatiijiga ah ee Turkiga
Mashruuca Tareenka Waddooyinka ee Trabzon Erzincan, Rugta Injineerada madaniga ah ee Madaxweynaha Laanta Socdaalka Mustafa Yaylali, ayaa soo saaray bayaan qoran. Bayaanka qoraalka ah ee Yaylalı waa sida soo socota: Maaddaama ay tahay aqoonta dadweynaha ee Rugta Injineerrada Madaniga ah Trabzon [More ...]
Naraydere Köprülü Dhexdhexaadinta
Duqa magaalada Nihat Ciftci, Narlidere Viaduct iyo Köprülü Junction ayaa sameeyay baaritaano. Madaxweyne Ciftci, goor dhaweyd iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada iyo isgoyska xubnaha warbaahinta ee udhexeeya tiirarka sadarka ayaa leh nusqaamo. Isgoyska aan sax ahayn " [More ...]
Go'aanka Maareynta Gaadiidka Dadweynaha ee Manisa
Dowladda Hoose ee Manisa, gaadiidka dadweynaha ayaa soo saaray bayaan ku saabsan qaanuunka qiimaha. Qiimaha iyo hadalada lagu bartilmaameedsanayo Dawlada Hoose iyo Duqa Magaalada Cengiz Ergün ee ku saabsan qawaaniinta qiimaha ee gaadiidka dadweynaha ayaa ka badan ujeedada [More ...]
Khadka Cusub ee Cusub Qulqul-darrooyinka ayaa bilaabanaya Berito
Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli waxay abuurtay khad cusub oo leh lambar '54' ee loogu talagalay muwaadiniinta ku nool xaafadaha Erenler iyo Tepeüstü. Khad cusub, Erenler Mahallesi ve Tepeüstü oo ka socda Bekirdere [More ...]
Gelemen Logistics Village-Tekkeköy Logistics Village Railway Connection Work Tender Result 2018 / 428768 GCC ayaa xaddidaya qiimaha 188.558.554,26 TL iyo qiyaasta qiimaha 261.427.895,90 TL ee Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka (TCDD) [More ...]
Nidaamka Xidhiidhka Dhibaatada ee Denizli
Xisbiga Wadaniga ee Denizli Madaxweynaha Gobolka Ibrahim Kasapoglu, ayaa carabka ku adkeeyay in dhibaatada ugu weyn ee magaalada haysata ay tahay isku-socodka gawaarida, wuxuu ku dooday in dhibaatadan lagu xallin karo gaadiidka tareenka. Gudoomiyaha Gobolka ee Xisbiga Wadani Ibrahim Kasapoglu, kahor doorashooyinka dawladaha hoose [More ...]
Bilowga mashiinka jiilka cusub ee lagu soo saari doono dhiirigelinta dowladda ayaa laga bilaabay waaxda baabuurta. The salaysan warshad ugu horeysay Turkiga-kar duray in ay soo saaraan block engine aluminium lagu tuuray. Warshadaha iyo Teknolojiyadda ayaa ka qaybgalay xafladda [More ...]
Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Bozankaya Goobaha booqashada
Wasiir Ku-xigeenka Warshadaha iyo Technology Hasan Büyükdeniz, baska ugu horeysay gudaha dalka Turkiga ee korontada ku sameeyey dhulka hoostiisa gudaha ugu horeysay ay dhoofinta iyo Bozankayabooqday xarunta wax soo saarka ee Ankara. Turkey, iyadoo ay technology sare iyo R & D maalgashi [More ...]
Sababta Sababta Maxay uga Fadhi Karaan Dastuurka?
Kuliyadda Farsamada ee Jaamacadda Duzce ee Waaxda Dhismaha Dr. Furitaanka saxaafadda ee aqoon-isweydaarsiga loogu talagalay mashruuca ka bixitaanka tareenka Xawaaraha Sare ee ay dhiseen Ayhan Şamandar ilaa wadada Düzce-Bolu waxay ku taal Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Düzce. [More ...]
Waa maxay Khadkee Metro?
Turkey ee marxaladda labaad driverless hore ee qayb Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe ee la bilaabay adeegga Metro. Khadkan, dhererka nidaamka tareenka ee Istanbul wuxuu gaadhay kiiloo mitir 170. 2022 ee Istanbul, dhererka nidaamka tareenka wuxuu heli doonaa kiiloomitir 455.7. halkan, [More ...]
Haddii ay jirtey metheorologist, ma jiri doonto shil tareen oo ku yaala Çorlu
dadka Çorlu 25 341 ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay sida la sii daayay maxkamad sugayo, waayo, musiibada tareen Road Dayactirka and Repair Supervisor Özkan Polat, Turkey Tareennada State (TCDD), unit Saadaasha hawada [More ...]
CHP Gürer: Shaqaalaha TCDD Qalinjebiyey Makhaayada Shaqaalaha TCDD waa in la furo
Xisbiga (CHP) Dadka Jamhuuriga ee, Nigde xigeenka Omar Fatxi Gürer, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) ka xaaladda shaqaalaha ka qalin shaqaalaha jaamacadda waxaa diyaarinaya jeedinta Law bixinta tas-hiilaadka in loo magacaabo si ay hawsha rayidka ah. Jamhuuriyadda [More ...]
Xisbiga Wanaagsan Ee Koncuk Wuxuu Su'aalo Siisay Kaga Hadleynaya Mashruuca Adana
Kuxigeenka Adana İsmail Koncuk, oo xubin ka ah wakiillada xisbiga wanaagsan, ayaa codsi u gudbiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha si ay uga jawaabaan su'aalaha ku saabsan Adana Metro. Adana xigeenka Koncuk Ismail, Turkey Grand National Assembly, si ay Madaxtooyada ee jasiiradda Metro [More ...]
Dhismaha Meelaha Ugu Weyn Caalamka ee Istanbul
line ugu horeysay Turkey ee metro driverless, taas oo ah wajiga labaad ee Metro Line Ümraniye-Çekmeköy ah, waxaa la furay Ra'iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan oo la dhaqday Istanbul Metropolitan Duqa Mevlut. Isaga oo ka hadlaya furitaanka Uysal, “Istanbul ee nidaamyada tareenka [More ...]